Uhlobo olusha lwe-Tails 3.9 distro ngokuthuthuka okusha seluyatholakala | Kusuka kuLinux
Okushiwo kuthenjisiwe futhiphakathi kwethu sinenguqulo entsha yemisila yokusabalalisa ye-Linux egxile kubumfihlo. Njengoba besikhuluma ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, mayelana nezici ebezilindelwe kulo mbono omusha weMisila ku-athikili edlule.
Ngaphandle kokubalinda Sethula okusha abasinikeza kona ngokufika kwale nguqulo entsha yoMsila 3.9 manje osutholakala emphakathini.
Kubalulekile ukukhumbula lokho Uhlelo olusebenzayo lweMisila uhlelo olusebenzayo ongaluqalisa cishe kunoma iyiphi ikhompyutha kusuka ku-DVD, stick USB, noma ekhadini le-SD.
Inhloso yalo ukugcina ubumfihlo bakho nokungaziwa komsebenzisi ukusatshalaliswa futhi kukusiza:
Sebenzisa i-Intanethi ngokungaziwa futhi udlule ekuvinjelweni, njengoba konke ukuxhumana kwe-Intanethi kukhompyutha esebenzisa lokhu kusatshalaliswa kuyadingeka ngenethiwekhi yeTor.
Ngokusebenzisa lolu hlelo lokuhlunga uxhumano awushiyi imikhondo kukhompyutha oyisebenzisayo ngaphandle kwalapho uqondiswe ngokusobala yisistimu nesiphequluli.
Ibuye inikeze ngesethi yamathuluzi we-cryptographic yesizukulwane esilandelayo yokubethela amafayela akho, ama-imeyili nemiyalezo esheshayo.
1 Mayelana nenguqulo entsha yeMisila 3.9
2 Landa inguqulo entsha yeMisila 3.9
Mayelana nenguqulo entsha yeMisila 3.9
Ngohlelo olubukhoma lweMisila, abasebenzisi bangangena kwi-Intanethi ngokungaziwa nangokuphepha. Uhlobo olusha 3.9 lufaka isoftware ngokuzenzakalela ngemuva kokuqalisa, ihlanganisa isoftware yokubethela yeVeracrypt futhi ithuthukise isiphequluli seTor enguqulweni entsha engu-8.0.
Uma abasebenzisi befaka iphakheji kusuka endaweni yokugcina, manje bangasetha Ngokuchofoza okukodwa imisila izofaka ngokuzenzakalela iphakethe kukho konke ukuqala.
Kodwa-ke, abathuthukisi beMisila baveza ukuthi le ndlela ingakucekela phansi ukuphepha kokusatshalaliswa okususelwa kuphakheji efakiwe.
Kubalulekile futhi ukusho ukuthi kulokhu kukhishwa okusha kweMisila 3.9 ukucushwa kwesitoreji okuqhubekayo kuthuthukisiwe ukwenza lula ukuskrola nangokuya ngemikhombandlela ye-GNOME.
Isoftware yeVeracrypt ibethela idatha ngevolumu efanayo. Abasebenzisi manje bangavula kalula eyodwa yalezi ngokuchofoza igundane (nge Izicelo ▸ Ithuluzi Lesistimu ▸ Vula amavolumu eVeraCrypt.).
Ngemuva kwalokhu, I-Thunderbird isebenza njenge-RSS esemthethweni ne-Atom newsreader. Yize i-Liferea isagibele, kepha njengoba kushiwo ku-athikili eyedlule, iLifera izothathelwa indawo yiThunderbird ngakho-ke kungakuhle ukuthi uqale ukuguquka kule nguqulo, kufanele iqale ekuqaleni kuka-2019 ngemisila 3.12.
Ekugcineni, Onjiniyela bavuselele amanye amaphakheji wesoftware. Le nguqulo engu-8.0 yesiphequluli seTor, nayo esuselwe kuFirefox 60 ESR. I-Thunderbird inyukela kunguqulo engu-60.
Futhi, abasebenzisi bathola iTor 0.3.4.7-rc ne-Electrum 3.1.3. futhi kubalulekile ukuthi wazi ukuthi iLinux Kernel yohlelo, ifika nohlobo 4.17, Abathuthukisi be-Tor balethe i-microcode ye-Intel ne-AMD processors kuze kube manje.
Abathuthukisi baveza ukuthi ukuqala nge-DVD kungathatha isikhathi eside kunezinguqulo zangaphambilini.
Kuzinguquko nezibuyekezo ezingagqanyiswa kulokhu kukhishwa okusha kweMisila 3.9 sithola okulandelayo:
Isibuyekezo sesiphequluli seTor kuya ku-8.0, ngokuya ngeFirefox 60 ESR.
Kususelwa kuFirefox Quantum.
Ukubuka okusha kwesifunda seTor
Ukuvuselelwa kweThunderbird kusuka ku-52 kuye ku-60.
Kubuyekezwe iTor kuya ku-0.3.4.7-rc.
Ukuvuselelwa okuhlukahlukene kwenza imisila isebenze kangcono kwi-hardware yakamuva (ihluzo, i-Wi-Fi, njll.)
Uhlobo olusha lwe-Linux kernel kuya ku-4.17, olungisa futhi ukuhlaselwa kweForeshadow
Imitapo yolwazi ye-DRM neMesa ivuselelwe kule nguqulo entsha yeMisila ukuthuthukisa ukuhambisana namanye amakhadi emidwebo.
Kubuyekezwe ama-microcode we-Intel ne-AMD kanye namaphakheji amaningi we-firmware.
Landa inguqulo entsha yeMisila 3.9
Uma ufuna ukuthola le nguqulo entsha yeMisila 3.9, kufanele uye kuwebhusayithi esemthethweni yephrojekthi lapho ungathola khona isixhumanisi sokulanda sesithombe sohlelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Uhlobo olusha lwe-distro Tails 3.9 ngokuthuthuka okusha seluyatholakala
IGNOME 3.30 "Almeria" isivele ikhishwe ngokusemthethweni